December 2016 ~ www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com
Walaal Akhri Oo Ka Faa'iideyso Talooyinkan Qiimaha Badan kuwaasi oo ku saacidi kara Aduun iyo Aaqiro-ba.
7:48:00 AM DIINI, NOLOSHA No comments
Walaal Akhri Oo Ka Faa'iideyso Talooyinkan Qiimaha Badan kuwaasi oo ku saacidi kara Aduun iyo Aaqiro-ba:
1- Ku bilow maalintaada Salaadda subax iyo ducooyinka aroorta si aad u hesho horumar iyo badbaado.
2- Wad Istiqfaarta waxay tirtirtaa dunuubtee
3- Ha joojin ducada waa xariga badbaadadee
4- Xusuusnow waxaad tiraahdo Malaa'ig baa qoreysee.
5. Niyaddaada wanaaji xataa hadday meel xun kaala daganayso.
6- Faruhu waxay ku qurxoon yihiin in lagu tasbiixsado
7- Haddii uu kugu bato welwelka iyo fakarku waxaad tiraahdaa "Allaah mooyee Illaah kale ma jiro"
8- Ku gado lacagtaada ducada danyarta iyo jaceylka masaakiinta.
9- Sujuud khusuuc leh oo aad ku dheeraato ayaa kaaga fiican daaraha quruxsan ee dunida.
10- Ka fakar intaadan oran, waxaa jirta oraah meel xun kaa tuurtee.
11- Iska ilaali habaarka kan dulman iyo illinta kaan waxba awoodin.
12- Intaadan wargeysyada akhriyin akhri Kitaabka Alle.
13- Sabab u noqo toosnaanta reerkaaga.
14- Naftaada Daacada Alle ku sandullee, naftu xumaantay amartaaye
15- Dhunko calaacalaha labadii ku dhalay aad liibaantide.
16- Dharkaaga duugoobay, masaakiinta waa u cuseyb ee ku sadaqeyso.
17- Ha caroon, noloshu intaad filayso way ka gaabantahaye.
18- Waxaa kula jira kan ugu awood badan uguna deeqtoon waa Allaah kor ahaaye.
19- Albaabka aqbalaada Alle yeysan kaa xirin macsidaadu.
20- Wax aad dhibta u kaalmaysato waxaa ugu fiican Salaadda.
Talooyinkii: Sheekh Caa'id Alqarnii.
Qore:Abdulahi Nur Colombo
QISO KU TAABANEYSA, DERSI FIICANA AAD KA HELAYSO ( FADLAN WALAAL AKHRI )
9:27:00 AM NOLOSHA No comments
Mudo 11 sannadood ah markii guurkoodii ay kasoo wareegtay haweenay iyo ninkeedii ama seygeedii ay is qabeen isuna dhaxeen ayaa waxaa u dhashay ilmahoodi ugu horeeyay oo wiil ahaa. Waxayna ahaayeen Lamaane is jecel iyadoo wiilka u dhasheyna uu u ahaa tufaaxii indhahoodu ay ku doogsanayeen.
Hadaba maalin ka mid ah maalmaha ayaa wiilkoodi oo laba jir ah, ayaa Aabihii arkay dhalo ama qarsho daawo sharoobo ah oo furan. Wuxuu ka daahsanaa shaqo, wuxuu u sheegay xaaskiisa in ay furka ku xirto, armaajada korena saarto. Hooyadi, oo Jikada aad ugu mashquulsaneyd, gebi ahaanba way hilmaantay. Wiilki ayaa arkay dhaladi, wuu qabsaday, wuuna wada cabay. Waxay ahayd sharoobo dadka waaweyn intii loogu tala galay ay ka qaataan, caruurtuna khatar ku ah.
Goortii ilmihii dhacay, Hooyadi ayaa kula carartay cusbitaalka, halkaasoo uu ku geeriyooday. Hooyadi qaracan iyo argagax ayaa isugu darsamay. Waxay ka sii naxsaneyd sida ay Saygeedii ama ninkeedii u wajihi doonto maadaama ay arrinta sahlatay.
Goortii Aabihii oo walbahaarsan yimi cusbitaalki uuna arkay meydka ilmihiisi uu sanadaha badan sugayay, wuxuu eegay xaaskiisii, ilmo ayaa wajigeedi qariyay. wuxuu ku yiri afar eray. Maxaad u maleynaysaa in ay afartaa eray ahaayeen?
Wuxuu ku yiri “Waan ku Jeclahay Gacaliso!!”
Samir iyo Iimaan Allaha naga siiyo.
Ficil celinta ninka ee filan waaga ah waa dabeecad ku dhisan garasho qadarta Alle, Sabur, deganaan iyo fahan nolosha ah. Inkastoo ay xanuun badneyd sida wax u dhaceen hadana Ilmihi waa dhintay. Marnaba dib looma soo celin karo. Wax natiijo ka dhalanmeyso inuu cillad iyo qalad u yeelo Hooyada. Iyaduba way weyday ilmaheedii. Waxay xilligaa u baahneyd waa Tacsi iyo Naxariis. Taasini waa wixii uu siiyay Gacaliyeheedii.
Mararka qaar walaal waxaan waqti badan ku luminaa yaa mas’uuliyada iyo eeda iska leh haday ahaan lahayeen xiriir lamaane, mid shaqo ama dad aan naqaan, waxaana na dhaafa diiranaanti ay dadka xiriirka ka dhexeeya heli lahaayeen hadday is taageeraan.
Haddaba, miyaysan ahayn wax aad u fudud inaan cafino kuwa aan jecelnahay ee inagu qaldama?
Ogsoonow: Wax kasta sabab ayay ku dhacaan. Noloshu way gaaban tahay. Ku qanacsanow waxa aad heysato. Ha shareysan xanuun, silic iyo saxariir. Badi Saburka. Cafi dadka. Xil iska saar mas’uuliyadaada. Iska tuur xasidka, xinka, maseyrka iyo naceybka, kolkaa waxaad ogaaneysaa in xaaladuhu xaqiiqdii u cusleyn sidii aad marki hore moodeysay.
Qalinkii: Farah Cawaash.
Sheko Gaaban Taasi oo Murti Dhaxal gal ah ku jirto (Hadaba Aqris wanaagsan)
8:10:00 AM NOLOSHA, Qormooyin, Taarikhaha No comments
Beri baa Boqor ka mid ahaa Boqoradi hore ee dalka Iiraan ayaa maalin ka mid ah maalamaha waxa uu socdaal ku marey gobolo badan oo dalkiisa ah dabeedna dadkiisa ayuu u balan qaaday qofkii uu ka helo xigmad iyo kalmad wanaagsan inuu siin-doono abaal marin aad u wanaagsan oo lagu farxo.
Boqorkii siduu u wareegaayey magaalooyin badan ayuu markii dambe waxuu la kulmay nin Oday ah oo da'diisu tahay 90 jir oo beeraya geed Saytuun ah. markaasaa Boqorkii waxuu ninkii odeyga ahaa uu ku yiri maxaad u beereysaa Geedkaan adigoo da' ah waayo sida la ogyahay geedka saytuunku mudo labaatan sano ka badan ayuu ku baxaa waqtigaasna inaad gaari doonto lama oga oo illaah unbaa garanaya.
Odaygi ayaa intuu qoslay waxuu boqorkii ku yiri; dadkii inaga horeeyey wey beereen anaguna weynu goosanay markaa anaguna waan beereynaa si ay u goostaan jiilasha soo socda ee mustaqbalka iman doona.
Boqorkii ayaa hadalkii aad ula dhacay oo ka helay, waxaana uu ku yiri; kalmad wanaagsan ayaad tiri; sidaa daraadeed, waxaan ku siinaya abaalmarin lacag dhan 400 oo dinaar .. Odaygi ayaa dhoola-cadeeyey, dabadeed boqorkii ayaa weydiiyey oo yiri maxaad u dhoola-cadeysay ? Odaygii ayaa ku jawaabay Geedka Saytuunku 20 sano ayuu ku dhalaa aniguna keygii haddu ii dhalay. sidaas ayuu wanaaga la sameeyo markiiba leeyahay abaalmarin dhaqso ah.
Qisadan waxaanu ka baran karnaa ummad kasta oo meel kuwada nool in jiilba jiilka ka dambeeya uu u dadaalo siduu uga tegi lahaa ama ugu reebi lahaa dhaxal wanaagsan oo anfaca.
Walaal Akhri Oo Ka Faa'iideyso Talooyinkan Qiimaha...
QISO KU TAABANEYSA, DERSI FIICANA AAD KA HELAYSO (...
Sheko Gaaban Taasi oo Murti Dhaxal gal ah ku jirto...